Ọ bụrụ na ị na-agụ Martech Zone nwa oge, ịmara na m nwere ike iji ezigbo ntakịrị enyemaka na ngalaba nchịkọta akụkọ. Ọ bụghị na ọ gbasaghị m banyere mkpoputa na ụtọ asụsụ, m na-eme. Nsogbu ahụ bụ nke ọtụtụ mgbe. Kemgbe ọtụtụ afọ, m na-ede ma na-ebipụta akwụkwọ anyị na ngwa ngwa. Ha anaghị agafe ọtụtụ ihu ọma - a na-enyocha ha, ede ha, ma bipụtara ha.
N’ụzọ dị mwute, nke ahụ wutere m ihere dịka m bipụtara ụfọdụ ịkwa emo asusu asusu karịrị afọ. M na ọbụna gwara ụfọdụ n'ime anyị copywriters banyere inwe ha na retainer iji nyochaa m posts ụbọchị ọ bụla. Agbanyeghị, achọghị m ichere ibipụta ka m tinyere ya. Ghara ikwu eziokwu na enwere m ike ịmasị etu ndụmọdụ ha si gbanwee ụda ọrụ m. Ezigbo ihe mere m ji zere ịga ebe ndezi. Ọzọkwa, m dee ọtụtụ edemede na m ga - emeziwanye iwu m banyere asụsụ Bekee.
Abụghị m naanị otu! Ramtọ asụsụ nyochaa ihe karịrị otu ijeri okwu Bugharia site na ngwa ngwa a ma ama ha n'ime otu ọnwa. Nke a bụ ihe ha hụrụ:
Ndi mmadu nwere okpukpu ato ka ha gha emehie na mgbasa ozi mgbasa ozi karia ka anyi di na ederede ozo. Ana m eche na ụfọdụ n'ime ihe a nwere njedebe nke Twitter (enweghị mgbanwe) na ụdị mkparịta ụka nke mgbasa ozi.
Might nwere ike ịhụ ọganihu na mpaghara a, ebe m tinyere ego na akwụkwọ ikike kwa afọ Grammarly, a ọrụ na-na-akpọ aha kasị mma n'ụwa ụtọ asụsụ. Emechara na ndọtị ihe nchọgharị, enwere m ike ide ngwa ngwa dezie njehie na-ahapụghị onye editọ m.
Asụsụ ederede Asụsụ - Onye nchịkọta akụkọ Grammarly dị egwu, na nyocha okwu, nyocha asụsụ, nyocha akwụkwọ ịkpọtụrụ, na-atụ aro ndị na-ege ntị, nyocha akwụkwọ, ịgụ akwụkwọ, nchọpụta ụda, ebumnuche, isi okwu, ebumnuche, aro okwu, nnọchi mara mma, ọnụ ọgụgụ okwu, ogologo okwu, na ndị ọzọ.
Mgbakwunye Nchọgharị Grammarly - Grammarly nwere ihe nchọgharị dị egwu. Ana m eji ndọtị Safari ugbu a n'ime WordPress 'Gutenberg nchịkọta akụkọ ugbu a n'isiokwu a. Ibe weebụ ọ bụla nwere mpaghara ederede na-enyere Grammarly aka na-akpaghị aka iji nyere gị aka. Nke kachasị mma, ịnwere ike ịnweta arụmọrụ bụ isi na enweghị ọnụ!